Guddiga horumarinta adeega Bulshada,arrimaha bini-aadanimada,warfaafinta iyo dhaqanka Golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay Wasiirka Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goodax Barre. Wasiir Goodax Barre ayaa warbixin ku aadan horumarada iyo wixii u qabsoomay Wasaaradda Waxbarashada mudada uu joogay siiyay Guddiga horumarinta adeega Bulshada,arrimaha bini-aadanimada,warfaafinta iyo dhaqanka Golaha Aqalka sare,waxaana Wasiirka su’aalo laga weydiiyay arrimo badan oo quseeya wasaaradda. Mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa ku dheeraaday ka hadalka warbixinta Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya wixii u qabsoomay,waxa u dhiman iyo halka ay hiigsaneyso. Sidoo kale,Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya ayaa sheegay in Guddiga ay daneynayeen iney xog ogaal u noqdaan mashaariicda waxbarasho meelaha ay ka socdaan,tacliintya sare ee jaamacadaha,dhaqanka,Hidaha,heerarka waxbarasho ee federaal. Gudoomiyaha Guddiga horumarinta adeega bulshada ,arrimaha bini’aadanimada ,warfaafinta iyo dhaqanka golaha Aqalka sare BFS Axmed Macallin axmed (Nadiir) ayaa wasiirka uga mahadceliyay warbixinta faah faahsan ee xaga waxbarashada ee gudiga uu siiyay. Gudiga horumarinta adeega bulshada ,arrimaha bini’aadanimada ,warfaafinta iyo dhaqanka golaha Aqalka sare BFS iyo Wasaarada waxbarashada xukuumada Federaalka soomaaliya ayaa isku afgartay iney si hufan u wada shaqeeyaan. | Bakool.net
Home / CAYAARAHA / Guddiga horumarinta adeega Bulshada,arrimaha bini-aadanimada,warfaafinta iyo dhaqanka Golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay Wasiirka Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goodax Barre. Wasiir Goodax Barre ayaa warbixin ku aadan horumarada iyo wixii u qabsoomay Wasaaradda Waxbarashada mudada uu joogay siiyay Guddiga horumarinta adeega Bulshada,arrimaha bini-aadanimada,warfaafinta iyo dhaqanka Golaha Aqalka sare,waxaana Wasiirka su’aalo laga weydiiyay arrimo badan oo quseeya wasaaradda. Mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa ku dheeraaday ka hadalka warbixinta Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya wixii u qabsoomay,waxa u dhiman iyo halka ay hiigsaneyso. Sidoo kale,Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya ayaa sheegay in Guddiga ay daneynayeen iney xog ogaal u noqdaan mashaariicda waxbarasho meelaha ay ka socdaan,tacliintya sare ee jaamacadaha,dhaqanka,Hidaha,heerarka waxbarasho ee federaal. Gudoomiyaha Guddiga horumarinta adeega bulshada ,arrimaha bini’aadanimada ,warfaafinta iyo dhaqanka golaha Aqalka sare BFS Axmed Macallin axmed (Nadiir) ayaa wasiirka uga mahadceliyay warbixinta faah faahsan ee xaga waxbarashada ee gudiga uu siiyay. Gudiga horumarinta adeega bulshada ,arrimaha bini’aadanimada ,warfaafinta iyo dhaqanka golaha Aqalka sare BFS iyo Wasaarada waxbarashada xukuumada Federaalka soomaaliya ayaa isku afgartay iney si hufan u wada shaqeeyaan.
Guddiga horumarinta adeega Bulshada,arrimaha bini-aadanimada,warfaafinta iyo dhaqanka Golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay Wasiirka Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goodax Barre. Wasiir Goodax Barre ayaa warbixin ku aadan horumarada iyo wixii u qabsoomay Wasaaradda Waxbarashada mudada uu joogay siiyay Guddiga horumarinta adeega Bulshada,arrimaha bini-aadanimada,warfaafinta iyo dhaqanka Golaha Aqalka sare,waxaana Wasiirka su’aalo laga weydiiyay arrimo badan oo quseeya wasaaradda. Mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa ku dheeraaday ka hadalka warbixinta Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya wixii u qabsoomay,waxa u dhiman iyo halka ay hiigsaneyso. Sidoo kale,Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya ayaa sheegay in Guddiga ay daneynayeen iney xog ogaal u noqdaan mashaariicda waxbarasho meelaha ay ka socdaan,tacliintya sare ee jaamacadaha,dhaqanka,Hidaha,heerarka waxbarasho ee federaal. Gudoomiyaha Guddiga horumarinta adeega bulshada ,arrimaha bini’aadanimada ,warfaafinta iyo dhaqanka golaha Aqalka sare BFS Axmed Macallin axmed (Nadiir) ayaa wasiirka uga mahadceliyay warbixinta faah faahsan ee xaga waxbarashada ee gudiga uu siiyay. Gudiga horumarinta adeega bulshada ,arrimaha bini’aadanimada ,warfaafinta iyo dhaqanka golaha Aqalka sare BFS iyo Wasaarada waxbarashada xukuumada Federaalka soomaaliya ayaa isku afgartay iney si hufan u wada shaqeeyaan.
ooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa si rasmi ah u dhammeystirtay saxiixa kubbad sameeya Spanish-ka ah ee Brahim Diaz.
Los Blancos ayaa Manchester City kala saxiixatay 19-jirka aadka usoo jiidashada wanaagsan.
Waxaa xusid mudan in muddooyinkii dambe ay kooxda reer Spain si aad ah u baadi goobeysay saxiixa ciyaaryahankan, waxaana ugu dambeyn ay caawa gacanta ku dhigtay saxiixiisa.
Illaa iyo hadda lama shaacin qiimaha rasmiga ah ee ay labada koox ku kala wareegsadeen Diaz.
Afar jeer ayuu xilli ciyaareedkan u saftay Diaz kooxda Man City, waxaana uu dhaliyay laba gool.
Waxaa inta badan wiilkan lagu tilmaamaa, Messi-ga Spain, Real Madrid ayaana ugu dambeyn gacanta ku dhigtay saxiixiisa.
Previous: Guddiga Horumarinta adeega Bulshada ee Aqalka Sare oo la kulmay Wasiirka Waxbarashada XFS (Sawirro)
Next: Saciid Cabdulaahi Dani oo loo Doortay Madaxweynaha cusub ee Puntland…